COVID-19 အခြေအနေတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဖွဲ့၀င်များအတွက်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ? | Mycanvas
COVID-19 အခြေအနေတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဖွဲ့၀င်များအတွက်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
ယခုလူအများစုကလက်ရှိမသေချာမရေရာမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုများရှိကြပြီး အဖွဲ့၀င်များရှိသောခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအနေဖြင့် စိုးရိမ်မှုများရှိနေတဲ့၀န်ထမ်းများကိုဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေအတွက် မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ လူတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိစွမ်းကိုအာရုံစိုက်တာဟာထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမသေချာမရေရာအခြေအနေမှာတောင်သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအဆင့်ဟာ ကျား၊ မ၊ အသက်၊ လူမျိုး စတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါတွေအစား ခြိမ်းခြောက်ခြင်းခံရတဲ့အခါ လူတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုက ပိုပြီးမြင့်လာပါတယ်။ တိကျတဲ့သူတွေဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုများပိုကြုံတွေ့ရ‌လေ ခံနိုင်ရည်စွမ်းပိုမြင့်လေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – COVID-19 ကြောင့် အလုပ်မှာပြောင်းလဲမှုများကိုလက်ခံလာနိုင်တဲ့အခါ ပိုပြီးခံနိုင်ရည်ရှိလာကြပါတယ်။ အိမ်မှအလုပ်လုပ်ခြင်း၊အလုပ်ချိန်ပြောင်းလဲခြင်း နဲ့ ယာယီအလုပ်နားထားခြင်းများကြောင့် အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အပေါ်ယံအပြုသ‌ဘောဆောင်သောဖြစ်ရပ်များထက် ခေါင်းဆောင်များက ‘အချက်အလက်’ ကျသောအကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုခြင်းက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသောခြိမ်းခြောက်မှုများနဲ့ ဒီလိုအခြေအနေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာများအကြောင်းပြောဆိုခြင်းကပိုကောင်းပါတယ်။